Apha uya kuba ngowokuqala ukuzama ubeko olutsha lwe-YouTube! | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJose Angel | | Uyilo lwewebhu, imixholo
I-YouTube entsha iza ngo-2017! Kwaye lelona qonga libalaseleyo leGoogle enkulu ikhethwe ukuba ijongeke ngokutsha ngabaqulunqi bayo. Ukufezekisa olu tshintsho, kudlule iminyaka eliqela kulungiso oluncinci ngokomfanekiso kunye nomdlali, kunye nebhokisi yezimvo kunye nezinye izinto ezintsha ezivelileyo.
Iqonga levidiyo elenza iibhiliyoni zokujonga yonke imihla kwaye apho ngaphezulu kwesithathu sabantu abagcina i-intanethi kumakhaya abo babhalisiwe, kuye kwafuneka ukulungiswa. Ukusuka kuGoogle, okanye kwiYouTube, bathi iyicocekile, ayilungelelananga uyilo, ukuze "kube lula ukuhamba kuyo" kwaye inike ukubalasela ngakumbi kumajelo avela kuyo. Kungenxa yokuba ewe, kuba kufanelekile.
Yinto engenakucaciswa, I-YouTube ayinakuba yinto, ngaphandle kwamawaka okanye izigidi zamajelo asebenzayo mihla le abaxhasa iqonga ngentengiso. Yiyo loo nto banokucinga ukuba bafanele ukubanjwa. Ukufikelela ukuze uzibonele ngokwakho kufuneka uye kwezi zilandelayo unxibelelwano kwaye hit «Yiya kuYouTube».
1 Uhlalutyo lotshintsho kuyilo
2 Indlela ... Mnyama!
Uhlalutyo lotshintsho kuyilo
Fund: Zininzi iinguqu kolu luyilo lutsha lweYouTube. Enye yazo kunye nokubetha ngokukhawuleza nje xa ungena, umbala. Phambi kokuba igcine ngwevu ngasemva (R: 241 G: 241 B: 241) ukwahlulahlula kwiibhloko apho yayiqulathe khona. Ngoku bagqibe kwelokuba babasuse kwaye bashiye umbala omnye kwaye ngenxa yoko imilo ethe tyaba kwiwebhu. Ngokuziva uncinci kwaye ucocekile.
TamañoKwipesenti ye-100% yoyilo zombini, izinto ezincinci zibonakala ngathi zigqamile. Ngaphambi kokuba babe ncinane noko kunamhlanje kwaye babonakale ngathi bazisiwe ngaphambili. Into enokuthi ngesisombululo esincinci isenokungabi nomtsalane, ukuba kruthisiwe. Ikwatshintsha ubungakanani beevidiyo, zihlala kwiscreen, ewe, hayi ividiyo.
panelPhambi kokuba iphaneli esekunene ivele ngokuzenzekelayo ukuba kwiseshoni yakho yokugqibela ibihleli njalo, ngoku ihlala ihleli. Kwaye kufuneka kungenxa yokuba izinto ezintathu zavela phezulu ngaphambili: «Ikhaya». "Iindlela". Msgstr "Imirhumo". Ngoku ibonakala kuphela kwipaneli yomsebenzisi ngasekhohlo.
Kuya kufuneka nditsho ukuba ikwinkqubo yotshintsho, mhlawumbi ezinye izinto ziya kuvela kamva
Abasebenzisi: Njengoko benditshilo ngaphambili, ngokutsho kwabo, abasebenzisi ngoku babaluleke ngakumbi kuyilo olutsha. Kodwa, andiqondi ukuba kunjalo. Inqaku elinye endinethemba lokuba bayongeza ukuba babefudula benayo kukubeka imouse ngaphezulu YouTube kwaye ubone umboniso wejelo lakho. Njengomfanekiso wakho kunye nomfanekiso ongasemva, ababhalisile kunye nolwazi olongezelelweyo.
Ibhokisi yolwazi eyongezelelweyoKukho utshintsho olukhulu kakhulu apha, kwaye kukuba xa uchaza kakuhle ukuba ngubani owayenze le vidiyo (kwimeko yeevidiyo), owayivelisayo okanye othathe inxaxheba kuyo, ayisayi kuphinda ibonakale njengento elula ebhalwe ngu umbhali. Ngoku iya kujongeka ingcali kwaye ihlelwe kakuhle. Yinto ebendiyifuna kwaye ibonakala ichanekile.
Indlela ... Mnyama!
Ngaphezulu kokulungiswa koyilo lokusondela kumaxesha amatsha, Imowudi emnyama luphawu olwahluke ngokupheleleyo. Into abantu abaninzi abangathanda ukuba yenzeke. Ngamanye amaxesha, sikwimeko, ukuba umbala omhlophe unokucaphukisa abanye abantu okanye wena. Kungenxa yoko le ndlela imnyama ibiyimfuneko.
Kubo bonke abangayiboniyo, ndinika umzekelo: Khawufane ucinge ukuba uhamba ngololiwe okanye ibhasi ebusuku kwaye baninzi abantu abaleleyo. Ukuba unemowudi emnyama, isibane esiza kubonakala kwilaptop yakho asizukubetha mnyama ngokungathi usiphatha mhlophe. Kukuzi ntlobo zeemeko apho kuluncedo. Kwaye abaninzi baya kuyixabisa.
Ukutshintsha kwimowudi emnyama, yiya kwipaneli entsha yomsebenzisi ekulungiselele yona i-YouTube. Apho ngaphambi kokuba utshintshe umsebenzisi kwaye uphume, ngoku unokwenza okungaphezulu. Njengemowudi emnyama, ulwimi okanye ukufikelela kuthintelo, phakathi kwabanye. Apho uya kubona ukhetho 'Imowudi emnyama: Hayi' kwaye uyitshintshe ibe ngu-ewe. Khumbula ukuba ukuba utshintsha ikhompyuter yakho okanye isikhangeli sakho, kuya kufuneka uyenze imowudi emnyama kwakhona.
Kukho izizathu ezaneleyo zokutshintsha kwi-YouTube ngoku kwaye ususe zonke iimbombo zeqonga ukufumana iindaba ezintsha, Ingaba ulunde ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Apha uya kuba ngowokuqala ukuzama ubeko olutsha lwe-YouTube!